Corneille, oo ka badbaaday xasuuqii Rwanda: jacaylkii ugu quruxda badnaa ee xaaskiisa Sofia ee guurka! - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE "Corneille, oo ka badbaaday xasuuqii Rwanda: waa sheeko qurux badan oo xaaskiisa Sofia ah ee guurka!
Corneille, oo ka badbaaday xasuuqii Rwanda: jacaylkii ugu quruxda badnaa ee xaaskiisa Sofia ee guurka!
Waa haween daryeela. Markii ay guursatay gabadha reer Corneille, Sofia waxay rabtay inay fikrad ka qabato qoyskeeda ninkeeda, oo la waayey intii lagu jiray xasuuqii Rwanda.
Dramas, wuu ogyahay qaar. Corneille way ka fog tahay markii uu jiray caruurnimo loo yaqaan " par ". Laga soo bilaabo sannadkiisa 6 iyo badhkiis, heesaha ayaa ah dhibane xadgudub jinsi ah oo uu udhashay sannadkiisii ​​Hore ee 18. Dhaawac sii soconaya nolosha. " Ma jiraan wax dagaal ah oo ka badan xad-gudub jinsi. Waxay ahayd eedo aan jeclaa, waan jeclaa iyada, waan ku kalsoonaa, laakiin waxay xaday denbigayga ", Waxa uu sheegay in tiirarka of Liberation this Wednesday 3 April. Laakiin waxay ahayd bilowgii jahannamada. Noloshiisa ayaa habeenkii 15 APRIL 1994 ku dhufatay, halka uu ahaa kaliya 17 sano jir ah. Wiilkan dhalay aabaha Tutsi iyo hooyada Hutu oo qayb ka ah caqiidada iyo siyaasadda ayaa lumiyay dhamaan qoyskiisa.
Corneille waa kaliya ee ka badbaaday xasuuqii qoyskiisa oo dhan. " Xilligan, qeyb ka mid ah aniga ayaa dhintay Wuxuu yidhi. Maanta maanta, wuu deggan yahay. Xaaskiisa waxaa laga yaabaa inaysan waxba ka ahayn. Tan iyo sannadkii 16, wuxuu ka dhigayaa jacayl kaamil ah Sofia, oo ah kanadada Canadian-Portugal iyo qaabka uu kula kulmay mid ka mid ah koodhadiisa. Waa jacayl waalan. Mar dambe isma tagaan. " Dhexdhexaad nooca, waa mid aad u liita iyo iska caadi ah, waxna ma qasbi karno "Waxa uu hubiyaa midka kale oo ka soo baxay gubasho.
Sannadkii hore Sofya waxay leedahay xitaa xasuusta. Kadib, maalinta arooska, arooskuna wuxuu lahaa fikrad cajiib ah ninkeeda iyo sharcigeeda. " Sofia de Medeiros ayaa goostay in ay ka tagto miis madhan oo ay u muujiso qoyskooda oo la waayay xasuuqa ", Soo sheeg saaxiibadeena. Iyo Corneille si ay u sharaxdo: Sidaa darteed, waxay awoodeen inay markhaati ka mid ah maalmaha ugu quruxda badan ee noloshayda ".
Maalmaha qorraxda, gabaygan ayaa weli ogaa sidoo kale. Gaar ahaan marka uu yimaado labada ilmood. " Waxaan ku jiraa xilligii ugu fiicnaa noloshayda. Maanta, waxaan haystaa laba carruur ah, Merrick [8 sano] iyo Mila [3 sano]. Anigu ma jahwareerayo mustaqbalkeyga markii aan waligay dareemeynin inaan aad u xunahay xagga sare ee guulahayga. Cabsideyda weyni waa lumineysaa waxa iga farxiya: qoyskeyga, kaliya Wuxuu soo gabagabeeyay.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore http://www.culturebene.com/49878-corneille-rescape-du-genocide-rwandais-le-tres-beau-geste-de-son-epouse-sofia-pour-leur-mariage.html
Lionel Messi wuxuu iibsanayaa hotel 4 * ee Mallorca